Ny mandeha manohitra amboadia ririnina in Holm | Holmbygden.se
Ny mandeha manohitra amboadia ririnina in Holm
Posted on 27 Septambra, 2013 ny Holmbygden.se
Natural akaiky kokoa ny fiainana mandady na mikisaka. Ny efa akaiky ny natiora Holm manana vahiny maro mpiremby nahitana. Ity faran'ny herinandro amboadia mety ho hita eo afovoan'ny Anundgård, Holm.
Tao an-tanàna sy ny manodidina, dia vao haingana no nahatsinjo bera ao amin'ny tanàna. Tapa-bolana lasa izay sköts Ary lehibe Björn I Liden. Nisy zavatra tsy fahita firy teo aloha Tena. Vakio ny lahatsoratra ST.
Tamin'ny volana Aogositra, nisy koa sakadia fotsiny manodidina ny tsikombakomba in Gimåfors, ahoana ny toeram-piompiana hetra no namoy ny ainy.
* Ny sakadia eo amin'ny sary dia tsy misy ifandraisany amin'ny asa.
Na dia sarotra kokoa ny nokapohiny, na izany aza, dia ny hoe ny Sabotsy alina iny ho nahita amboadia aho Anundgård. Nandritra ny hariva mandeha amin'ny mponina eo an-toerana nahita biby lehibe kokoa nitsangantsangana metatra vitsivitsy monja miala Holm ny fiangonana. Ny amboadia lehibe Volovoloina ny rambony dia hifindra tao afovoan-tanàna. Amin'ny indray mipi-maso izy roa lahy nanana fifandraisana maso sy nandalo motorist nijanona ary koa ny fahafinaretana mijery mpiremby. Ary izy ireo nanao ny amboadia tena fanantenana ny fiangonana fefy, ary nanjavona tany avaratra amin'ny swaying inching ny amin'ny am-pianarana.
Inona ny amboadia dia tonga tamin'ny fiangonana mba atao dia mazava. Mety ny fitsidihana ara-pivavahana dia ny toetra na ny fitsidihana tany rehetra tia mahazatra? Mety misy ny bera nalevina…
Fahazoana mivezivezy amin'ny alina na mpizaha tany toerana halehany
Ny olana amin'izao fotoana izao dia mazava fa raha toa ka mampidi-doza ny mandeha any an-tokotany amin'ny alina. Amboadia, na izany aza, dia tena mampidi-doza tsy fahita firy ny olona, ​​ary, ara-tantara, ny fanadihadiana ihany ny sasany enstaka vilda vargattacker ambany 1700- sy ny fiandohan'ny 1800s. Fanantenana dia iray fa afaka manampy ny distrika miaraka amin'ny fizotran'ny ny mpizaha tany bebe kokoa sy mpankafy Rehefa te hisambotra topimaso ny amboadia. Angamba ny orinasa ivelan'ny trano eo an-toerana niditra Trading handamina fitsidihana in Holm amin'ny amboadia Safari amin'ny ho avy.